आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न अब ढिलाइ नगरौँ
तराई मधेशमा एउटा प्रचलित लोकोक्ती छ, ‘लगपाँचे त सभ पवनी नाचे’ अर्थात् जतिबेला यहाँ चाडबाड सुरु भयो त्यतिबेलादेखि नै मधेश आन्दोलित छ । यसवीच नागपञ्चमी, कृष्णाष्टमी, हरितालिका तीज, चौठचन्द्र, जितिया, ईन्द्र पूजा, विश्वकर्मा पूजा आनन्द चर्तुदशी, सोह्र श्राद्ध लगायतका सबै ...
मधेशको आगो नदन्किए पनि निभेको छैन
राजनीतिमा विचार र सिद्धान्तको ठूलो अर्थ रहन्छ । अर्थात विचार र सिद्धान्त बिना राजनीति वा राजनीतिकदलहरुको संचालन प्राय असंभव मानिन्छ । तर, पछिल्लो समय नेपालमा अभ्यास भइरहेको राजनीतिक वातावरणलाई हेर्ने हो भने राजनीतिमा सिद्धान्त भन्ने कुरा पनि हुन्छ र भन्ने ...
आलै छ ओलीका अर्कमन्यता
काठमाडौं, २७ असोज । (टिप्पणी) बाहुन–क्षेत्री राजनीतिकर्मीहरूले शोषित, उत्पीडित, सीमान्तकृत एवं बहिष्कृत समुदायलाई न्याय दिलाउन सक्छन् भन्ने आश मर्दै गएको धरातलीय यथार्थ बीच मुलुकको ३८ औं प्रधानमन्त्री बनेका खड्गप्रसाद शर्मा केपी ओलीका सामू अवसर र चुनौतीको सँग सँगै उनको अभिव्यक्ति ...
राष्ट्रियताको लेपभित्र ओलीको ताजपोषी
संविधान सभामा एकीकृत नेकपा(माओवादी)को तर्फवाट प्रमुख सचेतक रहिसकेका गिरिराजमणि पोखरेलले आफ्नो पुस्तकमा लेख्नु भएको छ : अहिले मधेशलाई दुईटा यतिवादवाट बचाउनु पर्छ । एउटा केपी शर्मा ओली र अर्को सिके राउत । नेपालमा मधेश छदैछैन भन्ने कुराको वकालत गर्ने केपी ...
को होला प्रधानमन्त्री
संसदको जोडघटाउका आधारमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री पदमा सन्निकट देखिन्छन । एमाओवादी र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले वैशाखी नछाडेमा र ति दुई दलभीत्रको मतभिन्नता चुनावी प्रक्रियामा नेदेखिएका ओली प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का छ । त्यसअवस्थामा एमाओवादी प्रचण्डको वैशाखी टेकेर प्रधानमन्त्री ...
हाम्रो राष्ट्रियता के हो ?
काठमाडौं, २३ असोज । हामी कस्तो राष्ट्रवादको कुरा गरीरहेका छौं । केही जनताहरु स्वाभिमानको चर्को नारा लगाइरहेका छन् । केही जनता सिमा क्षेत्रमा पुगी सरकारप्रति असन्तोष पोखीरहेका छन् । राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरुभने राष्ट्रियताको आ–आफ्नै स्वार्थमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको ...
नस्सलीय राजनीतिले निम्त्याएको वितण्डा
तीन ठूला दलका केही नस्सलबादी नेताले एक थान सविधान घोषणा गरेर सत्ता हत्याउने प्रपञ्चमा मधेश तथा थरुहट आन्दोलनलाई कुनै सुनबाई गरेको छैन् । डेढ महिनादेखि तराई मधेश अशान्त छ । ४० भन्दा बढीले सहादत प्राप्त गरी सके तर पनि काठमाडौंलाई ...
नाकाबन्दी बारेको भ्रम चीरफार
नेपालका ठूला मिडियाहरुले ठूलै अक्षरमा शनिबार समाचार लेखेका थिए,– ‘आइतबारदेखि भारतले नाकाबन्दी खोल्ने, भन्सारमा थुप्रिएका सामान नेपाल भित्रिने ।’ एकैछिनमा यो समाचार व्यापक बन्यो । राजधानीमा खुशीको लहर देखियो । सामाजिक सञ्जालको भित्ता पनि यस्तै समाचारले भरिए । फेसबुकदेखि ट्विटर ...
‘सुको’ मोहोर–रुपयाँमा उक्लिए
सुशिल कोइरालाको ‘सर्ट नेम’ ‘सुको’ उनको ‘सर्ट नेम’ मात्रमा सिमित थिएन । उनको सामथ्र्य हीनता र असक्षमतालाई ब्यंग्य गर्नु परयो भने ‘सुको’ प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो । मानौं, ‘सुको’ नै प्रधानमन्त्री भएपछि देशले कसरी मोहोर रुपयाँ प्राप्त गरोस् ? तर, यिनै ...
के भारतलाई चिढ्याएर चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ला ?
संविधान घोषणा पश्चात नेपाल भारत सिमामा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको अबरोध पछि नेपाली समाज अर्काे छिमेकी मुलुक चीनलाई लिएर निकै ठूलो बहस भयो । मुलत : भारतबाट उर्जा लगायतका दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरु आउन रोकिएपछि चीनको सहयोग र सदभावको अपेक्षा राखियो । कतिपय ...
मधेशी पहाडी सबै भाई भाई...
काठमाडौं, १७ असोज । (टिप्पणी) हजारौं नेपाली जनताको बलिदानीबाट आएको संविधानसभा अन्ततः नेपालमा विवादित हुँदै बहुमतको आधारमा त्यसबाट पारित नेपालको संविधान २०७२ आउन नपाउँदै लाशैलाशको बीचमा त्यसको दहन भएको सर्वबिदित नै छ । जुन नेपाली समाज मात्रै हैन संसारले नियाली ...
संविधान, आन्दोलन र नाकाबन्दीमा कसले के गुमाए ?
आधा दशकभन्दा लामो संघर्ष पश्चात जनताले आफैं नेपालको संविधान निर्माण गरेका छन् । तर, यो संविधान निर्माण पश्चात जुन उत्साह, आशा र संभावना देखिनु पर्दथ्यो, त्यो प्राप्त भएन । बरु चरम अन्यौल र संकटहरु देखिएका छन् । भोलि के हुने ...
अब मधेशको राजनीति कता ?
संघीयताको मुख्य विषय सिमांकन तथा नामांकनलाई थाँती राखेर चार पार्टीबीच १६ बुँदे सहमतिको अधारमा संविधान जारी भयो । साँच्चिकै कलम उनीहरूको बलियो छ भने तरवार पनि उनीहरूकै धारिलो रु भन्ने प्रश्न यतिखेर तेर्सिएको छ । सत्तारोहणका लागि एक अर्काको प्रतिद्वन्द्वी ...
आन्दोलन काठमाण्डौँको सत्ता दलदलमा भाँसिदै
जनकपुर १२ असोज । मधेशमा जारी आन्दोलनलाई संसार भरि शोषित, उत्पीडित र अन्यायमा परेकाहरुले गर्दै आएको आन्दोलनसंग तुलना गर्दै राजनीतिक विश्लेषक सिके लालले मधेशको संघर्षको आयाम विश्वव्यापी भएको टिप्पणी गरेका छन् । यदि मधेशमा भएको आन्दोलनले सफलता पायो भने विश्वभर ...
किन रोज्यौ बाबुराम यति खराब समय ?
बाबुराम भट्टराईले एमाओवादी परित्याग किन गरे ? यसको स्पष्ट जवाफ स्वयं बाबुरामले दिएका छैनन् । भलै पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनले पार्टी परित्याग गर्नुको कारण र उद्देश्यलाई प्रष्ट्याउन त खोजे । तर, त्यो अपूर्ण मात्र होइन अविश्वसनिय र संकायोग्य छ । ...
मधेश–थरुहट आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दा
नेपालमा मधेशमाथी विगत २६० वर्षदेखि भेदभाव जारी रहेको कुरा सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । हालको नेपाल भित्र रहेका तात्कालिन राज्यहरू पृथ्वी नारायण शाहले कब्जा गरे देखि नै मधेशमा उत्पिडन र विभेद शुरू भएको हो । सोही समय देखि सरकारी ...
राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूहमा नेपाल
तमाम उकाला–ओराला र उबडखाबड बाटोबाट गुज्रँदै नेपालमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । सँगसँगै ती शक्ति पनि सक्रिय भएका छन्, जो नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भएको देख्न चाहन्नन् । त्यसैले उनीहरू संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई रोक्ने कोसिस गरिरहेका छन् । वास्तवमा ...
धरापमा सामाजिक सद्भभाव
विचारको राजनीतिभन्दा पनि अहिले अनुहारको राजनीतितर्फ समाज अग्रसर भएको अवस्थामा कहिले र कहाँ अकल्पनीय घटना हुन्छ, भन्न सकिन्न । हरेकको मनमा भय व्याप्त छ । संविधान निर्माण प्रक्रिया धरापमा छ नै, सामाजिक सद्भाव बिग्रिने जोखिम पनि उत्तिकै खतरनाक मोडमा रहेको ...
जुनसुकै कानुन शंसोधन र खारेज हुनसक्छ !
नेपाली सेना राज्यको सुरक्षाको लागि हो, नेपाली जनताको विरूद्धमा परिचालन र जातीय नरसंहार गर्नको लागि होइन । एक भाषा, एक भेष र एकल जातीय पहिचान र अहंकारी खस सोच र जातीय सेना, पुलिस, मीडिया र सत्ता, न्यालयको दम्भ र काँग्रेस, ...
थारु र मधेशीलाई गोली ठोक सरकार !
चार दलका शीर्ष नेताको आदेश नमान्ने मधेशी–थारु समुदाय कसरी देशका नागरिक हुन सक्छन् ? विभेदविरुद्व विद्रोहको आवाज उठाउने यिनीहरु देशद्रोही नै हुन् । सरकारले यसो गर उसो गर भन्दा पनि त्यसलाई मान्न अस्वीकार गर्ने यिनीहरु झन् आतंककारी नै हुन् । ...
मधेसी, किराँती, लिम्बू, तमु, तामाङ, मगर, थारु, मुसलमान, इसाई आदि इत्यादि समुदाय आ–आफ्नो आदि पहिचानसहित नेपाली पहिचानमा विस्तारित हुन चाहन्छन्विषयलाई दुईवटा दृष्टान्तको ऐनामा हेरौँ । कुनै एउटा नेपाली टिभी च्यानलको विज्ञापनमा प्रशान्त तामाङ भन्छन्— ‘गर्व लाग्छ मलाई नेपाली हुनुमा ।’ ...
दुई अतिवादको भुमरिमा मुलुक
अहिले मेचीदेखि महाकालीसम्म तराईमधेश अशान्त छ । विगत केही सातादेखि तराईका प्रायः सवै जिल्ला ठप्प रहेका छन् । सुदूर पश्चिम बन्द भएको त तीन साता नाँघिसकेको छ । यसप्रकारको सोलोडोलो मधेश बन्द २०६४ सालको युगान्तकारी मधेश विद्रोहताका पनि भएको थिएन ...
एउटा जनताको डायरी
नमस्ते मेरो नाम जनता हो । सबै नेताले मेरै निम्ती काम गरेको भन्छन । त्यसैले म सबैतिर छापिन्छु । सबैतिर बोलिन्छु । सुनेको छु, मेरो नाममा राजनीति हुन्छ रे । त्यस्तो धन्दा गर्ने मान्छेलाई चाही नेता भन्छन रे । तिनीहरु ...
६ प्रदेशले शोषित–पीडितको सपना चकनाचूर
देशमा संघीय प्रदेशहरू निर्माण गर्न मधेशलाई ६ टुक्रामा विभाजन गरेको छ । मधेश आन्दोलन र मधेशी जनताको चाहना र भावना विरीत मधेश क्षेत्रलाई टुक्रा–टुक्रा गरी मधेशीको मुटुलाई ठूलो आघात पु¥याएको छ । मधेशको मुटुलाई जीवित राख्दै मुटुको अंग–अंगको अप्रेशन गरी ...
मधेश आन्दोलनलाई सरकारको हेर्ने दृष्टिकोण
जन अधिकारप्रति खेलवाड गर्ने यथास्थितिवादी शक्तिहरूको मनोमानीका कारण अन्ततः देश आन्दोलित भयो नै । समग्र मधेश आन्दोलित भएको छ । संघीयताविहीन संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जलाउने कार्यबाट मधेशमा शुरू भएको विरोध आन्दोलनमा परिणत भएको छ । जङ्गबहादुर प्रवृतिका शासकहरूको स्वेच्छाचारिताका कारण ...